Top 3 Marketing Amaphutha Amabhizinisi Entsha Yenza | Martech Zone
Top 3 Marketing Amaphutha Entsha Amabhizinisi Yenza
NgoLwesine, Februwari 4, 2016 NgoLwesithathu, Februwari 3, 2016 UMark Montini
Kungani uqale ibhizinisi lakho? Ngizobheja ipulazi lelo ngoba "bengifuna ukuba ngumakethi" bekungeyona impendulo yakho. Kodwa-ke, uma ufana namakhulu osomabhizinisi abancane engisebenze nabo kungenzeka ukuthi uqaphele cishe imizuzwana engama-30 ngemuva kokuthi uvule iminyango yakho ukuthi uma ungazange ube ngumakethi, ubungeke ube umnikazi webhizinisi elincane isikhathi eside kakhulu. Futhi, kufanele kutshelwe iqiniso, lokho kuyakudina ngoba awukujabuleli ukumaketha futhi kuyakuphazamisa kwezinye izindawo zebhizinisi lakho.
Nginezindaba ezinhle. Ngenkathi ingekho indlela yokuqeda isidingo sakho sokumaketha ibhizinisi lakho, ungaqeda ukukhungatheka kwakho okuningi ngokubhekana namaphutha amathathu aphezulu wokumaketha engibona amabhizinisi enza.
Iphutha # 1: Gxila kumamethrikhi angalungile
Umthamo omkhulu wedatha otholakalayo wokuhlaziya ukumaketha namuhla ucabangisisa. I-Google Analytics, iyodwa, inikezela ngemininingwane eminingi ongayidla yonke impelasonto uyihlaziya - kuphela ukuyithola ekugcineni iholela eziphethweni eziphikisanayo ngokuya ngokuthi iyiphi idatha oyibeka kuqala. Futhi leyo idatha nje yewebhusayithi yakho! Ukubika ukukhangiswa kwedijithali, imithombo yezokuxhumana kanye nezinye izindawo zokumaketha kuyamangalisa futhi kuyaphikisana.
Ukufinyelela kuyo yonke leyo datha kuyinto enhle, kepha kungasebenza ukuphazamisa abanikazi bamabhizinisi amancane kwimininingwane ebaluleke ngempela. Kungakho kubalulekile ukuthi unciphise ukugxila kwakho kumamethrikhi amabili kuphela ekugcineni abalulekile uma kukhulunywa ngokukhangisa: Izindleko Zokuthola Inani Lekhasimende Nelokuphila Kwamakhasimende. Uma ukugeleza kwemali kuyinkinga uzofuna ukugxila kuNani Lamakhasimende Lanyanga zonke noma Lonyaka esikhundleni sevelu Yesikhathi Sokuphila, kodwa umgomo oyisisekelo uyefana. Uma inani (okusho imali engenayo) lekhasimende likhulu kunezindleko zokuthola ikhasimende, usesimweni esihle. Amabhizinisi anenzuzo awakhiwe kumamethrikhi okuyize njengokuchofoza, okuvelayo nokuthandayo. Amabhizinisi anenzuzo akhiwa ngamamethrikhi angabekwa ebhange, ngakho-ke gxila kulokho.
Iphutha # 2: Gxila kumaqhinga angalungile
Akukho ukushoda kwamasu namathuluzi amabhizinisi amancane angasebenzisa kuwo ama-dollar awo wokumaketha namuhla. Ngeshwa, amabhizinisi amancane amaningi kakhulu adonsela kuphela kumaqhinga asemfashinini futhi angazinaki izindlela ezibalulekile zokumaketha. Bagxila sonke isikhathi sabo nemali kumaqhinga akhiqiza ukuthandwa, abalandeli, futhi avule ngenkathi bengazinaki izindlela ezibalulekile eziholela ukuguqulwa, ukugcinwa kwamakhasimende, kanye nedumela eliku-inthanethi elikhiqiza amadola. Umphumela wuhlelo lokumaketha olubenza bahlale bematasa futhi bazizwe bebahle kepha isitatimende semali engenayo esibenza bagule esiswini.
Esikhundleni sokujaha zonke izitayela ezishisayo zokumaketha, abanikazi bamabhizinisi amancane kufanele bagxile kuqala ekukhuliseni imali engenayo evela kumakhasimende akho akhona, ukwandisa amaphesenti wemikhombandlela eba amakhasimende, nokuletha umuzwa wamakhasimende odala abalandeli abanesibindi. Lezo zinto ezibalulekile ziyisisekelo sebhizinisi elinenzuzo, elingenakho ukucindezeleka. Ngokuqinisekile ngeke benze ibhizinisi lakho lipholile njengokugxumela kuma-bandwagon amasha kakhulu ezokuxhum, kepha bazokukwenzela imali - futhi akusona isizathu sokuthi uqale ibhizinisi lakho?
Iphutha # 3: Gxila ku-Brand Engalungile
Eminyakeni eyishumi edlule, amandla okuchaza umkhiqizo 'webhizinisi asesukile ebhizinisini aya kubathengi. Eminyakeni eyishumi eyedlule amabhizinisi adlula ekuzivocavoca okubuhlungu ukuze achaze uhlobo lwawo abese emaketha akhokhelwayo ukutshela abathengi ukuthi bacabanga ukuthi uyini umkhiqizo wabo. Konke kuguquliwe. Ezweni lanamuhla, abathengi bachaza ibhizinisi 'lomkhiqizo kanye nobuchwepheshe bokusebenzisa kanye nemithombo yezokuxhumana ukutshela ibhizinisi - kanye namakhulu, uma kungenjalo izinkulungwane, zabanye abathengi - ukuthi uyini umkhiqizo wabo. Futhi bakwenza 24/7/365.
Ngeshwa, iningi lamabhizinisi (amakhulu namancane) ahlulekile ukuguqula ukumaketha kwawo ukukhombisa lolu shintsho. Baqhubeka ukugxila kwezokumaketha ekutsheleni nasekuthengiseni. Bathumela ama-imeyili amaningi, amakhadi wamathempulethi, futhi bathembela kwizaphulelo ukugcina amakhasimende abo. Imikhiqizo echazwe ngabathengi, ngakolunye uhlangothi, igxila ekumaketheni kwabo kulwazi lwabathengi nakubudlelwano. Bathumela amanothi okubonga, ama-imeyili anelisayo futhi baletha umuzwa ohambisanayo, osezingeni lomhlaba ukugcina amakhasimende abo.
Amacebo ayafana, kepha ukugxila kuhlukile. Qala ngokuchaza isipiliyoni ofuna ukuletha kumakhasimende akho bese wakha ukumaketha kwakho ngokuzungeza lokho okuhlangenwe nakho nokusebenza kwakho okuletha kukho. Akukho lutho olungalungile ngokunquma ukuthi ufuna umkhiqizo wakho ube yini, kepha ekugcineni kosuku abathengi abazonquma ukuthi ngabe yilokho okuyikho ngempela yini.
Tags: brandama-imeyili amaningiukugcinwa kwamakhasimendeizaphuleloI-google analyticsimikhondoamamethrikhi wokumakethaamaqhinga wokumakethaukuthambekela kwezentengisosocial mediaUbuchwephesheamakhadi we-template
UMark Montini uyiChief Results Officer ku Amasu we-m2M, inkampani yezentengiselwano esekwe e-Atlanta egxile ekuhlanganiseni amasu obuchwepheshe, ukumaketha kanye nedatha ukukhulisa umugqa wamakhasimende abo. Waziwa ngekhono lakhe lokwakha izinhlelo zokumaketha ezihlanganiswe ngokuphelele, uMark usize ama-franchise, izinkampani ze-Fortune 500, ama-startups, ezingenzi nzuzo, ngisho nezinhlangano zezepolitiki ezikhulisa imali.
I-WittyParrot: Ulwazi Lokuzenzekelayo Kwezokuthengisa Nezokuxhumana Kwezentengiso